I-Amazon ifuna ukuncintisana ne-Apple Music neSpotify | Ngivela kwa-mac
I-Amazon ifuna ukuncintisana ne-Apple Music neSpotify
Amazon ulungiselela ukwethulwa okusha insiza yokubhalisa yokusakaza umculo, Kubika iReuters. Isikhondlakhondla sobuchwepheshe siphothula amalayisense alo msebenzi, futhi kunamahemuhemu okuthi kungenzeka sethulwe ngasekupheleni kwaleli hlobo noma ekuqaleni kokuwa. Vele, i-Amazon isivele inikela ngenkonzo yomculo mahhala kwababhalisile beNdunankulu, kepha le nsizakalo entsha izobiza $ 9.99 ngenyanga, futhi uzonikela nge ikhathalogi yokuncintisana kakhulu kunezimbangi zayo, ebeka i-Apple Music neSpotify ezintanjeni.
Yize kuzongena sekwedlule isikhathi esikhaleni sokusakaza umculo, i-Amazon ikholelwa ukuthi ukuthola insizakalo yomculo ephelele kubalulekile ekuzimiseleni kwayo ukuba yisitolo esisodwa sokuqukethwe, ngokusho kwemithombo efanayo. Ukunikezwa komculo okusha kuhloswe ngakho ukwandisa isikhalazo se-Amazon Prime, futhi Ama-Amazon Echo.
Isinyathelo sokuqalisa insizakalo ngamalungelo wokusakaza womculo aphelele sinengqondo, kubhekelwa indlela yokuziphatha kwe- Amazon ezinyangeni ezisanda kwedlula. Ngomzamo wokwehlukanisa umnikelo wayo, i-wholesaler ngo-Ephreli yathumela a isevisi ezimele yevidiyo ngentengo ye $ 9 / ngenyanga.
I-Apple Umculo yethulwa ngoJuni wonyaka odlule ku 2015 WWDC, futhi kulindeleke ukuthi ibe nokuvuselelwa okukhulu kufayela le- Kulezi zinsuku iWWDC. Ngokwami ​​ngiyambona ukushiyeka okuningi ku-Apple Music uma siyiqhathanisa ngeSpotify, lapho benesidleke somsebenzisi esibuhlungu lapho ngizifaka khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Amazon ifuna ukuncintisana ne-Apple Music neSpotify
Landela igama eliyisihluthulelo le-WWDC 2016 bukhoma kusukela ngiku-Mac
UTim Cook ukhombisa ukuxhasa kwakhe umphakathi we-LGBT ngemuva kokudutshulwa kwe-Orlando